अबको ४ हप्तामा कोरोना भाइरसको प्रभाव क्रमिक रुपले घट्दै जाने चर्चित चिनिया डाक्टरको दाबी ! – दैनिक नेपाल न्युज
अबको ४ हप्तामा कोरोना भाइरसको प्रभाव क्रमिक रुपले घट्दै जाने चर्चित चिनिया डाक्टरको दाबी !
काठमाडौं, चैत २८ । कोरोना भाइरसले अहिले सिंगो विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ । कोरोनाका कारण करिब ९० हजार बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । चीनको उहान शहरबाट सुरु भएको यो महामारी यूरोप हुँदै अमेरिका प्रवेश गरेपछि यो अझै समस्याका रुपमा देखा परेको छ ।
यसैबिच चीनका बरिष्ठ कोरोनाभाइरस विशेषज्ञले आगामी ४ हप्तामा पूरै विश्वको अवस्था बदलिने बताएका छन् । कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि चीन सरकारले गठन गरेको मुख्य टिमका प्रमुख डा। झांग नेनशेनले अबको पुग नपुग ४ हप्तामा पूरै विश्वको अवस्था पहिलेजस्तै सामान्य अवस्थामा फर्कन सुरु हुने भविष्यवाणी गरेसँगै संसारलाई केही हदसम्म भए पनि राहात मिलेको छ ।
८३ वर्षीय झांगले चीनमा कोरोनाभाइरसको दोस्रो आक्रमण घट्नुमा मनिटरिङ सिस्टमलाई अत्यन्तै बलियो समेत उल्लेख गरेका छन् । डा। नेनशेनले शेनझेनको एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्ता दिँदै भने संक्रमणमा ढिलाइ ल्याउँ र आफ्ना केही बिरामीको संख्यालाई अलग अलग तरिकाले कम गरेर नै चीनले मृत्युदरलाई रोक्न सकेको उनले बताए । त्यस्तै कोरोनाबाट बच्ने अर्को तरिका हो यसको संक्रमणको दरलाई सबैभन्दा कम स्टरमा जैजाउने र त्यसलाई बढ्नबाट बस्ने त्यही समयमा भ्याक्सिन बनाउने ।
यसैबिच कोरोना भाइरसका कारण १६ लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये ९५ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने यो रोगबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका बनेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा कोरोनाका कारण निधन हुनेको संख्या १६ हजार ६ सय ९१ पुगेको छ । अन्य कुन देशमा कोरोनाका कारण कतिले गुमाए ज्यान हेर्नुहोस् तालिका…
दक्षिण कोरियाले तीन महिना भिसा थप्ने